အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 20-16 - သတင်း Rule
အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 20-16
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 20-16” ကိသ်ဖြစ်သူ Stuart ကရေးသားခဲ့သည်, ရှိမုနျကိုပါကင်နဲ့မှ Ian Ford ကား, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 15 ရက်, ဒီဇင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 09.35 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015, 25-21
ဒါဟာအကောင်းဆုံးဂိမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ romp ၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရဲ့ 2015, နှင့်တစ်မူထူးခြားသော Indie hits ၏မနေ့ကရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအပြီး, ဒီမှာပါ … ကောင်းစွာ, အနည်းငယ်ပိုပြီး. ငါတို့သည်ဤတစ်အလွန်အမင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္စာရင်းခဲ့သငျသညျသတိပေးခဲ့.
20. Galak နှင့်အတူ (PC ကွန်ပျူတာ / က PS4)
သငျသညျဘေးအန္တရာယ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်သ? Galak Z ကိုသင်တစ်ခုခုကိုလမ်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
အဆိုပါဗေဒ 1980 စနေနေ့နံနက်ကာတွန်းထဲကနေချေးယူသည်, အောင်မြင်စွာဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ၏လယ်ညှိနှိုင်းနေစဉ်ကလေးတယောက်ဂျပန်သူရဲကောင်းအာကာသယာဉ်မှူးအ hulk တပါးနဂါးဆင်းကြာဘယ်မှာမျိုး. သေး, အ bluster နောက်ကွယ်မှ, ဒီလာသောအခါဘေးအန္တရာယ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုလေ့လာအကြောင်းကိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအခြို့သောစွအာကာသဥမင်ထဲမှာတုနျလှုပျနေ, ကုန်ခမ်းဒိုင်း, မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုအံ့သြသငျသညျတစျဦးအပိုင်းအစအတွက် mothership ဖို့အိမျကဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. Jake Kazdal ကဒီဇိုင်း, အဘယ်သူ seminal သေနတ်သမား Rez အပေါ် Tetsuya Mizuguchi အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့, ဒါကြောင့်လည်းကောင်းတစ်ဦး-ရှာဖွေနေဂိမ်းရဲ့. သို့သော်စစ်မှန်သောအလှတရားကိုပင်လျှင်သင် thrusted နေရာသို့ဘေးအန္တရာယ်အတွက်တည်ရှိသည်, တချို့ကစားသမားများအတွက်, သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအနည်းငယ်လည်း stratospheric ဖြစ်လိမ့်မည်.
19. N ကို ++ (PS4 ကို)
Arcade rhythms ... N ကို ++.
N ကို ++ ၏ Arcade rhythms နီးပါးအသိအကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်. ဒါဟာသင်တူညီတဲ့လုပ်ရပ်ပြန်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, နောက်တဖန်အချိန်နှင့်, Spatial ဆင်ခြင်ခြင်းကျွမ်းကျင်ဖို့ရှာပုံတော်အတွက်. သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်, တစ်ဦး ပတျသကျ. အလှနျသေးနုနင်ဂျာ, ကိုယ့်အဘို့ဘဝ 90 စက္ကန့်. ထိုကာလများတွင်, သငျသညျငါးသေစေနိုင်သောအခန်းပေါင်းဖြတ်သန်းကြိုးစားရမယ်. ဒါဟာအများဆုံးဝတ္ထုသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေရဝုဏ်မဟုတ်ပါဘူး, နှင့်သေး, N ကို ++ လောလောလတ်လတ်မရှိမဖြစ်ခံစားရ (အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နေရတယ်လို့: ကိုင်တွယ်ရန်ပတ်ပတ်လည်နှစ်ထောင်စိန်ခေါ်မှုအခန်းပေါင်းရှိပါတယ်). လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်အကောင်းဆုံး Twitch ဂန္နှင့်ဝသကဲ့သို့, အစပြုသူကနေမာစတာဖို့ခရီးကိုသင့်ကိုယ်ပွားအသစ်စွမ်းရည်မှတဆင့်မကွား၏, ဒါပေမယ့်အစားသင်၏လက်နှင့်ကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ. တစ်ဦး uselessly အထူးသဖြင့်ရှုထောင်တဆိုသော်ငြား - သင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ထွက်ခွာ.
18. Borderlands မှပုံပြင်များ (မျိုးစုံသောပုံစံများ)
အဖြစ်ဆိုးနှင့်ဝမ်းသည်ပြုံးရယ်: အ Borderlands မှပုံပြင်များ.
အ Lego မှခေါင်းစဉ်နှင့်အတူကို Traveller ရဲ့ပုံပြင်များလိုပဲ, အခုမှမဆိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုယူပြီးနိုင်စွမ်းစက်ရုံတစ်ရုံကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုပေးစွမ်းသည်, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားဂိမ်းနဲ့စမတ်တစ်ခုခုသို့လှည့်, ဖျော်ဖြေမှုနှင့်မကြာခဏ Hilary. သော်လည်း Thrones ၏ဂိမ်းနှင့် Minecraft: ပုံပြင် Mode ကိုလည်းယခုနှစ် shined, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုခံစားသောဂီယာအုံ RPG shooters ကနေဒီလှည့်ဖျားပယ်ဖွင့်, ၎င်း၏မြတ်သောဇာတ်ကောင်မှကျေးဇူးတင်စကား, အဖြစ်ဆိုးနှင့်ဝမ်းသည်ပြုံးရယ်သာအစဉ်အဆက်ခြားတဲ့လေဆာရောင်ခြည်ပေါက်ကွဲမှုရှိရာအမှန်တကယ်ရယ်စရာဇာတ်ညွှန်းနှင့်တစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းဝဠာကျွမ်းကျင်သူနားလည်မှုကို.
17. မမြင်ရတဲ့ Inc မှ (PC ကွန်ပျူတာ / Mac က / က PS4)
မမြင်ရတဲ့ Inc မှ
စင်ကိုယ်ပျောက်ဂိမ်းကိုခံထိုက်သောသူတစ်ဦးကခေါင်းစဉ် Pun ယခုနှစ်အတွင်း, မမြင်ရတဲ့ Inc မှ. လည်းမည်သည့်အလှည့်-based မဟာဗျူဟာခေါင်းစဉ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်လှပမှုနှင့်အရေးတကြီးဝါကြွားတတ်ဖို့တစ်ဦးပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သင်မှာ .... ရှိသည် 72 2074 ရဲ့ megacorps စိမျ့သောကြောင့်သင်တို့၏ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကယ်ဖို့နာရီ, ခိုင်မြဲစွာသင်တို့တဘက်၌ stacked အလေးသာမှုနှင့်အတူအာဏာနှင့်ရန်ပုံငွေများကို siphoning, ပင်အရေးပါသောပြန်ရစ် function ကိုနှင့်အတူ. ၎င်း၏မကြာသေးမီကချဲ့ထွင်၎င်း၏ကျယ်ပြန့် customization နဲ့ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်ရေးကြောင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်ပြီးသားတန်ဖိုးရှိတဲ့ကင်ပိန်း၏အရှည်နှစ်ဆတက်; သငျသညျအခြေခံကျကျကိုသင့် playstyle ပြောင်းလဲလိမ့်မည်တလျှောက်ဆောင်ခဲ့သောသူ.
16. စူပါမာရီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို (Wii U)
စူပါမာရီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို ဓါတ်ပုံ: ကို Nintendo
တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အခြားမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်လျှို့ဝှက်စွာထင်ပါတယ်: '' ဟေ့, Shigeru Miyamoto ပြည့်စုံ hack ကကြောင်း; ငါကောင်းပြီ '' ။ ပိုကောင်းတဲ့လုပျနိုငျယခုကျွန်တော်တစ်ဦးအခွင့်အလမ်းများ. စူပါမာရီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုတစ်လှည့်စားအစွမ်းထက်ဖန်ဆင်းခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, မည်သူမဆိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်နှင့်ကမ္ဘာသူတို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့ပဲ ပတ်သက်. ခွင့်ပြု. ဒါကြောင့်နက်ရှိုင်းပြီးရှုပ်ထွေးင်ပေမယ့်, Nintendo အလုပ်လုပ်တယ်တစ်ခု interface ကိုဒီဇိုင်းဖို့ဘယ်လိုသိတယ်, ဒါကြောင့်ပစ္စည်းပစ္စယအဖြစ်တာပျော်စရာကစားကဲ့သို့ဖြစ်၏အောင်. ဒါပေါ့, ငါတို့ရှိသမျှသည်ချက်ချင်း Miyamoto တကယ်တော့တစ်ဦးပါရမီကြောင်းသဘောပေါက်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောအချက်င်.
← အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 25-21 Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုနိုးထကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →